မှတ်မှတ်သားသား စကားများ Archives - BuzzFeed Myanmar
ဘုန်းကြီးတွေကို သူတောင်းစားလို့ပြောတဲ့ မိန်းမ ။
ဘုန်းကြီးတွေကို သူတောင်းစားလို့ပြောတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးက ပြန်ရေးထားတာလေးပါ။
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရပါတယ်။
Jack Ma လို့ ပြောလိုက်လျှင် တော်တော်များများနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်နဲ့ တူသလို Alibaba လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ တည်ထောင်သူတစ်ဦး အဖြစ် တော်တော်များများ ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Jack Ma ဟာ Alibaba အင်တာနက်လုပ်ငန်းကြီးကို မတည်ထောင်ခင် သူ့ဘ၀အစမှာEnglish စာသင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ English စာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း သူ့ ကို ဒီအခြေအနေထိ ရောက်အောင်တွန်းတင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ လှေခါးထစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ထပ် တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်
လက်ထပ်တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ တစ်နေ့မှာ ယောက်ကျားလုပ်သူက မိန်းမကို ပြောတယ်။ မိန်းမရေ… ငါတို့တော့ ဒီအတိုင်းနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ငတ်သေဖို့ပဲရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ငါမြို့တက်ပြီး သူဌေး တစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ်။
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွား ခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်….
ဒါကြောင့် မိဘတွေရှိတုန်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ…မိဘတွေကို မင်းအတွက် စိတ်မပူပါစေနဲ့…မိဘတွေ လိုချင်တာက သားသမီးတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေထက် သားသမီးတွေရဲ့ အဖော်ပြုပေးမှုပါပဲ…ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတွေဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ….
ဝါးလုံးခေါင်း ထဲ လသာနေတဲ့လူတွေအတွက်
နာမည်ကြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းတစ်ခုမှာ သင်တန်းဆရာအဖြစ်အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါတယ်။ ဒီလူ့ကို $1500 ပေးရတယ် တိုက်ခန်းငှားပေးတာက တစ်လ သုံးသိန်း။ အရမ်းတန်တယ်ဗျာ။မြန်မာကွန်ပျူတာဆရာက တစ်လ ဆယ်သိန်းလောက်လိုချင်တယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာကိုငှားရင် သုံးယောက်လောက်မှအလုပ်ဖြစ်မှာကို သူတစ်ယောက်တည်းလုပ်တယ်။ report back ကလည်း ကောင်းမှကောင်း တဲ့။
အတွေးလွန် ကျွန်ဖြစ်… ကျော်မသွားနဲ့နော်.
ဖားတစ်ကောင်ဟာ ကင်းခြေများတစ်ကောင် လမ်းလျှောက် လာတာကိုမြင်တော့ ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်။“ငါ့မှာ ခြေနှစ်ချောင်း လက်နှစ်ဖက်ရှိတာတောင် လမ်းလျှောက်ရတာ ခက်ခဲတယ် တခါတစ်လေ ဘယ်ညာမှားပြီး ခြေလှမ်းတွေ လွဲနေတတ်သေးတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်ကြီးက ခြေထောက်တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတာ။ ဘယ်လိုများ လမ်းလျှောက် သလဲမသိဘူး တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ ဒီကင်းခြေများ ဒီခြေထောက်က အရင်လှမ်း ဟိုခြေထောက်က နောက်မှလမ်းဆိုပြီး သူ့ခြေထောက်တွေကိုသူ ဘယ်လိုများ ထိန်းချုပ်လဲ မသိဘူး”
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာပြည် မှ မိန်းကလေး အချို့အကြောင်းသိပြီးပြီလား
မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုထားရတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြန်မာ့အိနြေ္ဒ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟန်ပန်တွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့နဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအချို့တော့ရှိပါတယ်)
အကုသိုလ် ​အာရုံနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ !
မလွှဲမ​သွေ အကုသိုလ်​ဖြစ်​စရာ အာရုံ တစ်​ခုခုနဲ့ တွေကြုံရမှာပါ
အဲဒီ အကုသိုလ် ​အာရုံ ကို
ဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒ ရေးတဲ့ ယောက္ခမနှင့် ချွေးမ ..!
မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ရဲ့ ဆွမ်းခံအိမ်မှာ အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်အဓိဋ္ဌာန်လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ မိမိစားမယ့်အစာရဲ့ တစ်ဝက်ကို အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ဦးဦးဖျားဖျားလှူပြီးမှ စားလေ့ရှိတာပါပဲ။ တကယ်လို့. အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် အနားမှာ အလွယ်တကူ မရှိရင်လည်း တစ်ဝက်ကိုဖယ်ထားပြီးမှ စားလေ့ရှိတာပါ။